Home » Featured » IBC 2018 - Dib u eegida Ross of #IBCShow
David Ross, Agaasimaha Guud Ross Video
IBC waa mid ka mid ah saldhigyada ugu weyn ee taariikhda warshadaha warbaahinta iyo waxay bixisaa fursad qaali ah oo loogu talogalay abuurayaasha fikradaha inay yimaadaan oo ay arkaan horumarka ugu dambeeyay ee tiknoolajiyada wax soo saarka. Nasiib darro, sidoo kale waa dhacdo 4-maalin lagu qabtay maalmo 5, iyo hoos u dhaca tirada dadka soo booqda sanadkan waa in miisaanka lagu daraa codad badan oo ka mid ah bandhigayaasha waawayn ee ku baaqaya isbedelka qaabka iyo hoos u dhaca dhererka bandhiga. Ka dib, haddii NAB ay ku xiran karto in ka badan 93,000 booqdayaasha 4, dhab ahaantii ma jirto sabab macquul ah sababta ay IBC uga qaybgalayaasha 55,000 u baahan yihiin 5.
Siyaasad ka mid ah, bandhigga sanadkaan wuxuu ahaa mid aad u qorrax leh oo si aad ah u iftiiminaya badeecooyinka cusub ee laga soo iibsado noocyo badan oo waawayn, Ross Video isagoo ahmiyad weyn u leh. Ross wuxuu u yimid IBC isaga oo alaabta cusub ee 21 iyo cusboonaysiin muhiim ah taniyo NAB bishii April - waa mid cajiib leh oo heer sare ah. Dusha sare ee liiska waxyaabaha cusub waa inuu ahaado Carbonite Ultra, a brand cusub cusub 1RU 3ME furaha ka Ross ah. Carbonite Ultra wuxuu ka bilaabmaa wax ka yar $ 11k liiska US waxaana ka mid ah waxqabadka farabadan ee I / O ee macaamiisha qaarkood waxay iibsadeen oo kaliya sida processor-ka signalka! Sidoo kale cusub oo ka yimid Ross sanadkan Ultritouch, si buuxda-loo-qaabeyn karo oo loo qaabeyn karo isku-xirka touchscreen ee nidaamka xakamaynta iyo kormeerka.
Ultritouch si dhakhso ah ayaa loo dejin karaa codsiyo dhaqameed sida router, dadka isku dhafan iyo xakamaynta calaamadaynta, laakiin awooda dhabta ah waa kartida wax kasta oo aad rabto, si kastaba ha ahaatee waxaad rabtaa. Muuqaal kale oo la soo saari karo ayaa ahaa PIVOTCam-SE, kamarad cusub oo 24 Megapixel oo leh wareegga xNUMXx zooming. PIVOT-Cam wuxuu bixiyaa waxqabad aad u awood badan oo ah qiimaha la heli karo oo la heli karo - oo ku haboon wax soo saarka meelaha meelaha ay ku jiraan miisaaniyad ama miisaaniyad ayaa la xaddiday.
Marka laga soo bilaabo badeecada wax soo saarka, waxay ahayd mid aad u xiiso badan sannadkan si loo arko korodhka sii kordhaya ee caan ka mid ah 12 SDI oo ah mashiin. Dhawr sano ka hor, waxaan soo booqday shirkadaha yar yar ee waaweyn ee yar yar oo aan ka helnay cabasho guud oo ah in la tixgeliyo samaynta jajabka 12G, sababtoo ah, in la soo saaro hal shirkad, "tartamadaada ayaa dhamaantood sheeganaya in mustaqbalku yahay IP. Waxaan iyaga ka codsaday in ay "chips i for iyo kuwa kale raaci doonaa". Sureey, waxay raaceen Ross iyo hadda waxaa jira tiro sii kordheysa ee suuqyada 12G ee suuqyada laga soo saaro dhammaan shirkadaha waawayn, iyaga oo sharraxaya go'aankeena ku aaddan 12G iyo inaan sii wadno horumarinta alaabooyinka SDI, 12G iyo IP-da. Waxaan aamminsanahay in 12G ay ka dhigan tahay habka la heli karo, wax-ku-oolka ah oo wax-ku-oolka ah ee loogu talagalay macaamiisha kuwaas oo aan dooneynin in ay sameeyaan isbeddelka is-weydaarsiga ee kaabayaasha ah ee IP. Kama horjoogsanaynin muhiimadda IP-ga, dabcan waan ku faraxsanahay in aan ka caawinno macaamiisha inay u guuraan gebi-ahaan shaqada IP-yada ah haddii ay taasi tahay meeshii ay doorbidaan, laakiin waxaan sidoo kale isku dayeynaa inaan noqonno kuwa ugu muhiimsan iyo caawimaad noocyo badan oo kala duwan ee macaamiisha sida aan awoodno. Warbaahin badan oo dunida oo dhan ah ayaa wali ka shaqeynaya SD, waxaanan ka shakisanahay in SOM-kooda ay habeenkii toosan yihiin iyagoo walaac ka qaba guuritaanka IP-ga. Macaamiishani waxay u shaqeynayaan sida Ross oo kale, mana jeclaanayo fikradda ah inaan u sheegno inaanaan ka caawin karin inay ka gudbaan ganacsiga, caqabadaha farsamo iyo kuwa hal abuurka ah ee ay la kulmaan maalin kasta. Markii ay weydiisteen saxafi IBC sanadkaan ra'yigeyga ku saabsan xawaaraha IP-korsashada, waxan ku jawaabay isagoo runtii sii kordhaya, laakiin xawaaraha qaadashada 12G SDI wuxuu kordhayaa xitaa dhakhso ah. Looma baahna in shirkaduhu ay noqdaan kuwo yaryar oo ku saabsan 12G - waxaa jira baahida macaamiisha iyo ganacsi fara badan oo loogu talagalay dadka diyaar u ah inay ciyaaraan cayaar dheer oo ku yaala suuqyadeenna dheer.
Wixi warar dheeraad ah oo ku saabsan badeecooyinka lagu soo bandhigay IBC by Ross Video, Fadlan booqo www.rossvideo.com/IBC/
Broadcast Engineer Broadcast Engineering CES2017 David Ross digital Nirvana IBC kormeerka warbaahinta MStar Ross Video SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Fiilooyinka Subtitling subtitling, Digital Nirvana, kormeerka warbaahinta, IBC Ultra HD Forum Video Engineer	2018-09-27
Previous: Plura si ay u sii daayaan alaabta wax burburtay ee #NABShow New York
Next: Engineer Dejinta AV